UKHUNJULWE UMHLOHLI OGQWESILEYO WOLWINI LWESIXHOSA EFORT HARE - Transform SA - The leading Transformation Magazine
Owayesakuba yiNtloko yesebe leelwimi zabaNtsundu kwiYunivesithi yase Fort Hare uGqirhalwazi Zandisile Saul (uTshawe) ulandulele eli emva kokugula ixeshana.
Kwindibano ibibanjwe kwiqonga lonxibelelwano iTeams, iindwalutho zakwaNokholeji, usapho lwakhe, kwakunye nabathandi bolwimi lwesiXhosa bahlomle bekhumbula ugxa wabo nohlohle iminyaka engaphaya kwamashumi amathathu kule Yunivesithi.
Obeququzelela lenkonzo, uGqirhalwazi Lukhanyo Makhenyane nongene ezihlangwini zika Gqirhalwazi Saul usichazele ngokugula kwakhe nangomsebenzi wakhe. Ngenxa yomsebenzi omhle ubusenziwa ngu lo ka Saul uthe “akukho lula ukungena ezihlangwini zakhe yaye ebelulutho kwiYunivesithi kangangokuba emveni kokuyeka kwakhe ukuphangela baphinda bamcela bamnika isingxungxo. Uthe esekweso singxungxo yongama impilo, kuba ebehlutshwa sisifos omhlaza, wacela ukuphunyuzwa ngowama 2019,” uvakalise lomazwi uGirha Makhenyane.
Ziphuphumile iinkumbulo kwabo bebefudula besebenza naye nabamchaze njengomntu owayenentlonipho nowayewukhuthalele umsebenzi wakhe. “Indlela uTshawe ebewuthanda ngayo umsebenzi wakhe nendlela ebenobuntu nentobeko nembeko ngayo, ebengumzekelo kubantu abaninzi. Ebethanda ke nokuqhula nanjengoko kwindawo akuyo bekuhlala kuhlekwa esonwabisa kumnandi, naxa ehlohla ifonetiki ebesebenzisa uburharha ukuze ingene lula kubafundi imfundiso yakhe.” utshilo uGqirhalwazi Zoliswa Sidzumo Mali eseBoston University, eMelika.
UNjingalwazi Buyiswa Mini nowayehlohla uQgirhalwazi uSaul ebutsheni bakhe ubalise ngobomi bakhe njengomfundi owayenesimilo nowayewamela amalungelo wakhe. “uZandisile, esengumfundi oselula wabonakalisa iimpawu zokuba yinkokheli ngexesha apho yayingekaxhaphaki into yokuba abantu bamele amalungelo abo. Wakhe walwela ukudlelelelwa kumanqaku wakhe wonyaka (iyear mark) kwesinye isifundo, wayo kuqhina kwiofisi yenqununu ngokwayo, emise ngomzekelo omhle wakwesi sesiXhosa isifundo. Indlela awayenembeko ngayo yandothusa ngoba wayengandibizi ngqo xa ethetha nam wanyendibiza ingathi uthetha nomntu wesithathu,” utshilo uNjingalwazi Mini.
Ikhankatha lakhe nelaziwa nje ngomakhwekhwetha ekufundiseni ulwimi lwesiXhosa uNjingalwazi Christo Botha nobhale incwadi kunye no Gqirhalwazi Saul lo, ubalise ngendlela ebebesebenzisana ngayo ekuphuhliseni ulwimi lesiXhosa nasekuqulunqeni le ncwadi. Wabalisa nangendlela uGqirhalwazi Saul awasithatha ngayo isigqibo sokuya eYunivesithi. “uTshawe wandibalisela ukuba wayesebenza egadini eHogsback waza wacetyiswa ngomnye wabaqeshi bakhe ukuba aze ayokufunda kwiYunivesithi, waze ke wayilandela longcebiso,”utshilo uNjingalwazi Botha.
Ukanti nabo baphuma phantsi kwezandla zakhe baye baphefumla ngoluvo lwabo ngobom besisi nxiba-mxhaka. uSiyabulela “Mbathane” Makwethu owayefundiswa ngulo ka Saul udlulise umyalezo ngombogo ubuquka amazwi athi:-
Sivakele isithonga sokuwa komthi omkhulu, Imkile ngenene into enkulu,
Simkile isisele senyathi nomthombo wolwimi lwesiXhosa,
Sibuthumile isidwangube nembalarha yezafobe,
Limkile irharha elirhonorhono lolwimi lwesiXhosa,
Litshawuzile ukugoduka iTshawe,
Tshe layo kutshona ukugoduka sisanxonxothela isizwe sikaPhalo,
Wadwanguza wemka uMdange sadangala.
Togu, kaMdange, kaTshiwo obetshotsha entla
Akunani kufa, uthathe ixhwangusha, noko usana besele luzihambela,
NguNjingalwazi lo osele ekhuphe abanye ooNjingalwazi,
Sesizuzile thina kufa, wena awuzuzanga nto,
Kaloku umsondeze kooyise mkhulu neento zoSatyo bolwimi,
Phumla Mdange ooMbathane noko bombethe ulwimi lwakho,
Noko aMakhuma akakhumshi,
Sukuxhala Xhosa, uTshawe akashiyanga mafokofoko,
Tshotsho Nomtshomski sifunde nto kuwe nangoku,
Nangoku kufe inyama, wena usathetha.
Esinye sezithethi uNjingalwazi Nomsa Satyo ophuma kwakwisebe leelwimi zabaNtsundu ugxininise indlela ebekhuthele ngayo nendlela ebencedisa ngayo abafundi nabancedisi bakhe uGqirhalwazi Saul.
Obemele usapho lwamaTshawe nokwangumninawa kuGqirhalwazi Saul ukhumbuze iqonga ukuba ebeyithanda kakhulu imfuyo yakhe yaye bafunde lukhulu kuye.
Previous Previous post: THE RIGOURS OF BECOMING A BLACK AUCTIONEER
Next Next post: CHANGING THE ADVERTISING LANDSCAPE
2 thoughts on “UKHUNJULWE UMHLOHLI OGQWESILEYO WOLWINI LWESIXHOSA EFORT HARE”
30 Oct 2021 at 11:20 am
Hoha! Liwonga elihle eli, neliyifaneleyo le Ndwalutho yaseMaTshaweni. Makaphumle, kuba ugqatso ulufezile.
Sesibona ngokunxakama kwesizwe uba kuhambe ingqalangqa.
Kuyabonakala kwaye kuyavakala uba noko esi sithwakumbe sixhwile uphopho,
noko lomsinga usube ikwekwe enkulu…